Yariisoow Oo Meydkiisa Lagusoo Celiyay Muqdisho Oo Ku jirta Bandowgii Uu Kusoo Rogay Bilooyin Ka Hor [Faallo].
Sunday August 04, 2019 - 19:24:31 in Wararka by Super Admin
Diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka dowladda Qadar ayaa maanta barqadii garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada Muqdisho kasoo dajisay Meydka guddoomiyihii gobolka Banaadir.
Cabdi Raxmaan Yariisoow oo khamiistii lasoo dhaafay ku dhintay Isbitaalka Hamad ee magaalada Dooxa kadib markii uu dhaawac culus kasoo gaaray qarax Al Shabaab ay ka fulisay xarunta gobolka maamulka gobolka Banaadir bishii July ee lasoo dhaafay.
Meydka Cabdi Raxmaan Yariisoow ayaa iyadoo Muusigga Baanbeeyada loo tumayo salaadda Janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha waxaana munaasabaddii duugtiisa ku sugnaa madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka sida Farmaajo iyo Kheyre.
Yariisoow oo ahaa shakhsi si weyn uga dhax muuqday siyaasadda Soomaaliya ee dabadhilifnimada ku dhisan ayaa caan ku ahaa in uu u adeego shisheeyaha wuxuuna ahaa siyaasi sanadadii dambe jeebka ugu jiray Farmaajo iyo Kheyre.
Cabdi Raxmaan Yariisoow oo ahaa duqii Muqdisho iyo guddoomiyihii maamulka gobolka Banaadir ayaa bishii April ku dhawaaqay in magaalada Muqdisho lagu soo rogay bandow si loo xakameeyo weerarada Xarakada Al-Shabaab wuxuuna tallaabadaas ku tilmaamay go'aan kasoo baxay madaxda sare ee Villa Somalia, islamarkaana laga filayo in ay ka soo baxaan Natiijooyin miro dhal ah.
Wuxuu qabtay shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo xaaladda degdega ee la geliyay magaalada iyo isbedalka ay kusoo kordhin karto xaalada amni ee dalka, wuxuuna aad u difaacay go'aankaas oo ahaa mid xakaariyay dadka reer Muqdisho.
Ninkan dhintay ayaa Bandow geliyay ku dhowaad Sedax milyan shacab reer Muqdisho ah, isagoo warbaahinta lahadlayay ayuu sheegay in Bandowga oo lagula dagaallamayo "Argagaxisada" uu noqon doono mid adag.
Wuxuuu go'aankaas sababay in dadkii xanuunsanaa soo gaari waayaan goobaha caafimaad, carruurtu iskuullada ka harto, dumarkuna wadooyinka ku umulaan.
Mar la weydiiyey waxa uga qorsheysan dadkaas ayuu ku jawaabay "hasoo istaagaanno waddooyinka inaga ayaa soo qaadeyna'e"
Xafiis aanu Bandowgu saameyn
iyadoo dhibaatada uu kusoo rogay dadka Soomaaliyeed ay buux dhaafisay magaalada oo idil hadana Yariisoow wuxuu ku raaxaysanayay xafiis aanu bandowgu saameynin oo ay howlihiisu kala socdaan, adeegyadiisuna u dhameystiranyihiin balse wuxuu mooganaa ama is moogeysiinayay in aanu dagaalku ka socon waddooyinka Muqdisho iyo jidad xaafadeedyada balse lagu hardamayo xafiisyada dowladda!.
Weerarkii 24-kii July ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka Banaadir wuxuu markale banaanka soo dhigay in ilaalinta xafiisyada dowladda iyo difaacida xarumaha dowladda uusan ku xirneyn waddooyinka oo la xiro ama jidadkoo dhaxgaan lagu jaro.
Yariisoow magaalada Muqdisho ayaa lagu beegsaday iyadoo ay caasimadu ku jirto bandowgii uu ku rogay, waxaana lagu aasay isla iyadoo ku jirto bandowgii uu saaray balse su'aashu waxay tahay isagu tagayaye, dadka reer Muqdisho maka fool dhaqan doonaan falalkiisii gurracanaa mise fariintuu dhigaa lagu falgali doonaa?.
Maxaa Lagu Xusuusan doonaa?
Soomaalidu waxay tiraahdaa "Hadaad dooneyso in lagu amaano iska dhimo" taas oo ay kala jeedaan inaanu Soomaalidu cidba ka xumaanin. oraahdan waxay igu soo dhacday markii aan arkay qaar ka mid ah Soomaalida oo Yariisoow ku tilmaamaya inuu ahaa 'halyeey' ka baxay dadka Soomaaliyeed, iyadoo ay hubaal tahay in haddii dib loo raaco taariikhdiisu ay soo baxayso xaqiiq midaas ka duwan.
Dadka ugu badan ee Yariisoow amaanaya una baroortay ma ahan reer Muqdisho ee waa qurba joogtii dibadaha lagusoo anshax xumeeyay kadibna soo galay siyaasadda Danyuusnimada ku dhisan ee dalka, shacabka Muqdisho wax saameyn ah kuma yeelan geerida Yariisoow kuwa badan oo kamid ahna waxay aaminsanyihiin in aan loo darsan doonin.
Yariisoow waxaa lagu xusuustaa inuu ahaa camiil u seeteysan madaxdiisa iyo jaranjar lagu gaaro hadba meesha loo baahdo, wuxuu ku tilmaanaa dadxumo iyo damiir la'aan, waxaana loo dhiibi jiray hadallada iyo tasriixaatka ay ka xishoodaan madaxda ama dhibsadaan.
Isaga ayuu ahaa ninkii muddo todobaad ah beeninayey duullaankii ay Kenya ku soo gashay Soomaaliya 2011-dii. xilli adduunyada iyo warbaahinada oo idil ay soo tabineyso gummaadkii ay ciidamada Kenya ka geysanayeen Qooqaani iyo Taabto ayuu ku har iyo habeen soo taagnaa warbaahinada isagoo beeninaya in ay ciidamo Kenyaati ah ku soo duulleen wadanka.
Isaga ayuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee lagu tijaabiyey dhacdadii Bariire ee lagu xasuuqay dadka Soomaaliyeed. Markii madaxda dowladda iyo AFRICOM ay ka xishoodeen ka hadalka wixii dhacay, isaga ayaa ku dooday in dadka la laayay ay ahaayeen Argigixiso cadow ah inkastoo goor dambe markii ay fadeexadu ballaaratay tirtiray bayaankii hore, soona daabacay mid kale.
Isla isaga ayuu ahaa midkii ku faanay duqeyntii lagu laayay dadkii Masaakiinta ahaa ee lagu beegsaday Tuulada Axmad Yare ee duleedka Jilib, halkaas oo lagu xasuuqay qoys dhan oo Aabo, Hooyo iyo awoowe intuba ka bad-baadin.
Intaas waxaa sii dheeraa in uu hay'adaha reergalbeedka ee macaash doonka ah ka iibiyay in badan oo ka mid ah dhulka Muqdisho, hantida Muslimiintana beylah uga dhigay shirkadaha gaalada.
Yariisoow xitaa ma ahayn mid sumcad iyo ixtiraam ku dhex leh bulshada uu ka dhashay, iskaba dhaafe in Soomaali u baroorata'e, laakiin waxaa ku dhaboowday maah maahdii ahayd "iska dhimo hadaad rabto in lagu amaano".
Waxaa qoray: Xasan Nuur
FG:Qoraalkan looma qaban karo SomaliMeMo, waa aragti u gaar ah qoraaga ku xusan, hadaad dooneyso inaad aragtidaada dhiibato la xiririir
Qarax gaari looga gubay ciidamada AMISOM oo ka dhacay Xaafadda Suuqa Xoolaha Muqdisho.